Dzidziso: Rekodha skrini mune yako GNU / Linux kugovera | Linux Vakapindwa muropa
Kune nzira dzakawanda dzekupa kune yemahara software kufamba, kwete nekungowedzera mitsara yekodhi kodhi kune mapurojekiti. Tinogona zvakare kushandira pamwe nekushandura software, kumhan'ara matambudziko atinowana kunharaunda dzekusimudzira kuitira kuti vagone kuzvigadzirisa, vachiparadzira nhau uye zvidzidzo sezvatinoita mu blog ino, nezvimwe. Uye imwe yedzakanakisa nzira dzekuparadzira dzidziso ndeye kutora screenshots kana kurekodha zvinoitika mukati medesktop medu uye nzvimbo yekupedzisira, kuitira kuti tipe ruzivo rwakanyanya uye rwunoshanda.
Uye zvakare, iyo youtuber phenomenon iri kuenda yakasimba, vanhu vazhinji vari kupinda munyika ino, uye zvinoita kwandiri sechinhu chinonakidza kubata, kunyanya izvozvi nyika yemitambo yemavhidhiyo paLinux iri kubudirira zvakanyanya, uye zvirokwazvo vashandisi vazhinji kubuda Linux vatambi vane shungu dzekurekodha mitambo yavo kuti vaiise papuratifomu ine mukurumbira, vachiratidza zvavakaita, ongororo, nezvimwe. Saka kana iwe usingazive maitiro ekutora zvinoitika paPC yako, mune ino dzidziso tichaenda kuratidza akanakisa dzimwe nzira dzauinadzo uye nemaitiro ekuzviita ...
1 Kugadzirira kwekare:
2 Maitiro ekunyora iyo graphical nharaunda
3 Maitiro ekunyora rekodhi
Usati watanga kuisa chero chirongwa chekreencast kana kutora zvinoitika pachiratidziri, ndinokupa zano kuti uteedzere aya matipi, kana zvisizvo iwe iwe unomhanya mune mamwe matambudziko izvo zvinowanzo gumbura uye pazviitiko zvakawanda, kana iwe uri mushandisi nyowani hautomboziva kuti Chibviro chii. Aya matambudziko anonyanya kudzika midzi muLinux graph stack kana odhiyo stack, ndiko kuti, mune ese madhiraivha uye masystems anobata magiraidhi uye odhiyo kugadzirisa mune yedu distro kana inoshanda sisitimu.
Pakati pese, anonyanya kufarirwa distros atogadzirisa iyi stack zvakanyatsonaka uye ave nezvose zvinotyaira madhiraivho kuti zvese shanda nemazvo kubva pakutanga. Nekudaro, ini ndinokurudzira kuti iwe utarise zvakanyanya kune iwo 100% emahara distros, iwo anobvisa akakurumbira mabhinari mabhurumu, sezvo chimwe chinhu chingave chisinga shande zvakanaka mavari, kunyangwe chisingafanire, musimboti maGPU anonyanya kuzivikanwa nemakadhi eruzha anofanirwa kushanda zvisina musono nevatyairi vemahara. Asi rangarira zvakare kuti aya 100% emahara distros anogona kuunza mamwe matambudziko kana zvasvika kune multimedia, uye izvo ndezvekuti ivo havana mamwe macompeceti emakodhi anodikanwa ekugadzirisa odhiyo uye vhidhiyo yekurekodha kwako.
Uye kana uri mushandisi wepamberi uye wafunga kuvaka yako distro kubva pakutanga kana kuti wakasarudza ma distros senge Arch Linux, Gentoo, Slackware, nezvimwe, izvo zvinowanzouya zvimwe "zvisina" maererano nesoftware uye unofanirwa kuiisa iwe sezvaunoda , yeuka usakanganwe nezve mapakeji akadai sePulseAudio, ALSA, macodec mapakeji, nezvimwe, sezvo muchiitiko changu vanowanzo kuve tarisiro yematambudziko mazhinji pavanenge vachishanda nerudzi urwu rwechirongwa chatinopa pazasi.
Semuenzaniso, rimwe rematambudziko akapusa andakamhanyira mariri nderekuti yanga isiri kurekodha chero ruzha zvachose, uye ini ndakangonanga ku setup zvakanaka ASLA uye PulsAudio sezvo paive nemimwe migero kana odhiyo midhiya nezwi rakadzikiswa kusvika pamuganhu. Kana isu tinogona kunyange kugadzirisa iyo yakaenzana yeiyo system kudzora kumashure ruzha uye nekuvandudza mhando.
Maitiro ekunyora iyo graphical nharaunda
Kune akawanda zvirongwa uye dzimwe nzira Kurekodha iyo skrini pane yako GNU / Linux distro, pamusoro pemakore andanga ndichishanda nemaLinux masystem ndakaedza akati wandei. Semuenzaniso, imwe yekutanga yandakayedza yaive RecordMyDesktop pane yangu SUSE distro. Ipapo ini ndakaedza nezvirongwa zvakati wandei kuti ndione yandaida zvakanyanya, pakati pavo Kazam uye yakareba, nezvimwewo, asi pakupedzisira ndakagara neVokoscreen (unogona kuiona mune skrini yandakaita) iyo yandakaita zvakanyanya yezvakarekodwa zvemakosi ekudzidzisa, nezvimwe.
Ndeipi yekusarudza zvakare idambudziko, asi ini ndichakuzivisa iwe ku runyorwa rwezvirongwa zvekurekodha skrini inonyanya kuzivikanwa:
Vokoscreen: mumaonero angu ndechimwe chezvakanakisa, zviri nyore asi zvine simba, ndosaka chiri chandinoda uye icho chandinokurudzira ini pachangu. Inotsigira akasiyana mafomati evhidhiyo, inobvumira odhiyo yekurekodha, sarudzo dzakasiyana dzekurekodha, Webcam rutsigiro futi, nezvimwe. Uye ini zvechokwadi ndinoona mashoma mashoma ...
Kazam: Kana iwe uchida chimwe chinhu chakanyanya kushomeka, chakareruka uye nekukurumidza kune vanotanga, pamwe Kazam ndizvo zvauri kutsvaga. Izvo zvinokanganisa zvichienzaniswa neVokoscreen ndeye Webcam rutsigiro uye kuti ine mashoma masarudzo ekugadzirisa, ayo anoitamisa zvishoma.
SimpleScreenRecorder: iri Qt-based app inorarama zvinoenderana nezita rayo, zviri nyore kwazvo. Iyo yakagadziriswazve kushanda nemachina ane yakaderera mashandiro uye iko kuri nyore kune hukama nekushanda kwayo, sezvo iine yakawanda sarudzo dzekumisikidza, izvo zvinogona kunge zvichinyonganisa mune yayo graphical interface.
rekodiMyDesktop: Inonyanya kuve yekuraira turu turu yakanyorwa muC iyo maGI maviri akavakirwa paQt4 neGTK akawedzerwa. Icho chakareruka uye chiri nyore kushandisa (unogona kana kuchishandisa kubva kukoni pamwe nerekhodimydesktop yekuraira), asi kanganwa nezve rutsigiro rweWebhuCam uye mafomati evhidhiyo nemavhidhiyo evanokwikwidza ...
ScreenStudio: ndeye multiplatform kurekodha app yakanyorwa muJava. Izvo kana zvishoma zvine sarudzo imwechete seVokoscreen kana Kazam, uye iwe unogona kuishandisa pane chero chikuva. Dambudziko hombe nderekuti zvinoenderana = Java RE 8.0.
Green Recorder: iyi yakapusa uye yakajeka app, ine sarudzo dzakawanda uye inogona kuve yakanaka imwe nzira yeKazam kana Vokoscreen, asi haina rutsigiro rwekurekodha WebCam. Zvisinei, ine chimwe chinhu chandinoona chinonakidza kwazvo, uye icho ndechekuti inotsigira Wayland.
Vhura Broadcaster Software Studio: inonzi zvakare OBS Studio ndiyo yepamusoro system uye iine dzimwe sarudzo dzaungawana yeLinux. Iwe unogona kurekodha akati wandei zviitiko uye chinja pakati pavo, une mafirita evhidhiyo, odhiyo musanganisi, sarudzo dzekutepfenyura kwepamoyo, nezvimwe. Pane zvinopesana, iwe unofanirwa kuziva mushe mirawo uye sarudzo dzinobatwa kuti dziite gadziriro yakakwana kana kuti iwe unozozvirasa pachako nehukuru hwayo interface.
Kuisirwa kwechero chazvo hakufanirwe kunge kuri dambudziko, sezvo paine DEB, RPM mapakeji pane epamutemo mawebhusaiti eumwe neumwe wavo, iwe uchavawanawo mumabhuku e distro yako kuti iwe ugone kuzviisa nyore neyum, APT , zipi, nezvimwe. Uye kune mamwewo, sezvakaitika kuVokoscreen, iwe yaunogona kuwana mune binary pasuru .run kuti hautombofaniri kuisa, ingomhanya uye ndizvozvo!
Sezvandamboreva, Ini ndinoda Vokoscreen yeiri nyore, uye nekuti inoshanda chaizvo kubva pane izvo zvandakakwanisa kuongorora. Sezvauri kuona mune yayo interface, iwe unowana iyo skrini sarudzo kuti utore iyo yakazara skrini, hwindo rimwe chete kana nzvimbo, kunyangwe kana iwe uchida kuti kurekodha itevere yako cursor, kukudza girazi mhedzisiro, inofambira mberi kuverenga kuverenga kwemasekondi kubva kwairi inotanga kunyora, nezvimwe. Kune rimwe divi, iwe une mabhatani eKutanga, Kumbomira, uye Misa kurekodha kwaungaitonga nayo
Inotevera eyelash Izvo ndezve odhiyo, uye iwe unogona kusarudza pakati pekushandisa PulseAudio uye ASLA, uye kana uine mamaikorofoni akati wandei muchirongwa, unogona kusarudza iwo aunoda kuve mutariri wekutora ruzha. Imwe yakakosha tebhu ndiyo multimedia imwe, kwaunogona kusarudza vhidhiyo uye odhiyo fomati, mafuremu pasekondi yekubatwa (usaise yakawandisa kana iwe usina mifananidzo ine simba rakanyanya), uye odhiyo nemavhidhiyo macodec (rangarira kusarudza yakanyatsokodzera). Uye mamwe ese ma tabo ndiwo sarudzo dzekuchengetera, nezvimwe. Zviri nyore handizvo?
Maitiro ekunyora rekodhi
Parizvino nezve maitiro ekunyora mu graphic modhi, asi iwe unofanirwa kuziva kuti kune zvekare vabati veiyo terminal kana koni ye distro yako, chimwe chinhu chinoshanda kwazvo muUnix nyika maunoshanda zvakanyanya kubva kune iyo terminal. Kazhinji, mune ino kesi, iwo mapurogiramu akareruka anoda kugadzirirwa kushoma kana prerequisites pane apfuura, saka ndinofungidzira kuti uchave nematambudziko. Uye sezvandakaita nezvakaitwa zvekare, ndichadaro nyora zvimwe zvakanakisa chii chauri kutsvaga
ttystudio: chirongwa chiri nyore chinokutendera kuti utore zvinoitika mune terminal, asi zvinodaro muchimiro cheGIF yehupenyu. Inonyanya kubatsira kutumira mhedzisiro gare gare pawebhu. Pasina mubvunzo chimwe chezvandinoda.
asciinema: inokutendera kuti utore uye ugovane zvinoitika muzvikamu zvekupedzisira.
Shelr- Imwe chirongwa che boradcasting pane yakajeka mameseji skrini.
Showterm: Imwe nzira inobatsira chose kurekodha.
TermRecord: inogona kurekodha zvirinyore chikamu chechikamu chekupedzisira uye inobvumidza kuburitsa zvakabuda muHTML, zvinonakidza kufumura zvabuda pawebhu.
ttyrec: chishandiso chekurekodha iyo terminal uye inosanganisira chishandiso chekutamba.
tty2gif: chimwe chishandiso chakareruka icho, sezita zvarinoratidzira, chinokutendera kuti utore uye utumire kuGIF
Kana iwe ukagovera ne -g sarudzo, iyo yekumisikidza haizove yepasi rose. Paunenge waiswa, unogona kuvhura yako terminal uye tanga kurekodha uye kutumira kunze kuGIF yemirairo uye zvese zvinoitika mune yako terminal ne:
Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo uye nekodhi yayo kodhi mune yayo Github saiti...
Usakanganwa kusiya yako inotsanangura, nekusahadzika kunovapo, mazano, mamwe mapurogiramu angangoitwa aunoziva, zviitiko, nezvimwe. Ndinovimba iyi dzidziso inokubatsira uye iwe unogona kuita zvinyorwa zvakanaka mu distro yako ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Dzidziso: Rekodha skrini mune yako GNU / Linux kugovera
Nice post, yakakwana kwazvo.
Ndiri kuenda kuyedza sarudzo dzaunonyora kuti uone kana makomendi achioneka ...
Ini ndichangobva kuisa vokoscreen paDebian Strecht, ndiri kuita zvakanaka.
Ndatenda zvikuru nezano.
Ray padilla akadaro
Ini ndaisa vokoscreen paManjaro uye ndine matambudziko ekunyora skrini. Kana ndichiita zvekutora zvinhu zvese zvinofamba mushe, asi pandinochengeta nekutamba vhidhiyo ndinoona kuti systembar inonyangarika nguva nenguva, kunyangwe pahwindo rimwe chete randinosarudza rinonyangarika uye rinowoneka nekukurumidza. Ndokumbirawo kana iwe uchiziva chakakonzera dambudziko, ndinokumbira rutsigiro rwako.
Pindura kuna Ray Padilla
Mhoroi, ndinoda kutanga kutora mavhidhiyo ekuisirwa nyowani uye mhinduro dzandiri kugadzirisa mulinux, asi ndine kusahadzika nezvekuti ndingabata sei kumisikidza kubva pakutanga kwekugovera kusanganisira chikamu chandinopinda muBIOS uye ndichichinja kubhoot neusb.
Ndeipi nzira chaiyo yekugadzira vhidhiyo yakaita seiyi, kuisa kune isina chikamu kubva kune imwe partition ine linux uye imwe chirongwa chekubata ipapo kana chimwe chakadai.
Une dzimwe nzira mbiri. Ese ita kumisikidza mumuchina chaiwo uye nokudaro rekodha ne software kana kutenga chishandiso chinokutendera kuti utore vhidhiyo kuburitsa kwePC.
Ehezve, kana iwe uine yakanaka kamera uye katatu, chikamu cheBIOS chinogona kutorwa kubva kuchionera.